April | 2016 | ध्रुव प्रसाद गजुरेल
बधाई छ ऐतिहासीक संविधानसभालाइ
आज ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान घोषणा हुर्दै छ । सवैलाई शुभकामना …………
कयौ दशक लामो जनताले संघर्ष गर्दा पनी
सविधानसभाको चुनाव सम्म हुन सकेन,
7, 17, र 36 सालहरु पनि वित्दै गए
जनताको हातबाट सविधान बन्नै सकेन ।
2046 को जनआन्दोलनको उपलब्धीलाइ
पुरै समर्थन, आधा र कोहीले मान्नै मानेनन,
देश कालो वादल र गृहयुद्धमा होमीन पुग्यो
आन्दोलन, हत्या र हिंसाले चल्नै नसक्ने भयो ।
राजतन्त्रको सक्रियता, खोसिए अधिकारहरु
एकै जुट भए माओवादी,, एमाले, कांग्रेसहरु,
माओवादी जनयुद्ध, 62/63 को जनआन्दोलनले
गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभाको चूनाव भो .
पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा, गर्वमा तुहिदा
दास्रो संविधानसभाको पनि शंका ठुलो भो,
दलहरुको आ-आफ्नै हठ, अडान र घमण्डले
देश असफल राष्ट्र बन्ने प्राय निश्चित नै भो .
वैशाक 12 गतेको महाविनाशकारी भुकम्पले
देश तहस नहस र कयौ हजारको ज्यान गयो,
उद्धार, राहात र पुन निर्माणको संकल्प गर्दै
नेपाली राजनितिक दलहरुमा अनौठो सम्झौता भो .
सम्झौतै सम्झौताको खातमा 16 वुद्धेको उदयले
संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्ने भयो ,
संघियता, सिमा, सुनिश्चितता, अधिकारहरुले
आन्दोलन, हिंसा, सदभाव भड्कदै कोलाहल भो .
मघेशवादी र केहि दलहरु मिलाउन नसक्दा
सर्वसम्मत नभइ संविधानसभा केहि खल्लो भो,
छलफल, प्रक्रिया, विधि र सहभागीताले गर्दा
विश्मै नेपालको संविधान सभा लोकप्रिय भो .
537 सभासदहरुको हस्ताक्षर र प्रमाणीकरणले
सवैतिर खुसीयाली नै खुसीयाली छाएको छ,
राष्ट्रपतिबाट गरीने विधिवत घोषण सँगै
नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने भएको छ .
संविधान स्थायी नभइ शंसोधन गर्न सकिने
संयुक्त वक्तव्य दिएका छन ठुला दलहरुले,
हिमाल पहाड तराई मधेशी थारु अन्यहरुले
गौरव र ऐतिहासिक खुसीयाली मनाउ सवैले .
लामो समयको अन्यौल र अस्थिरताको अन्त्य सँगै
देश विकास र आर्थिक क्रान्तिको बाटो खुल्दैछ,
नयाँ नेपाल नयाँ जोस जागर र उत्साह सँगै
सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरु खुल्दैछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोडेर जादेछौ,
हामीले भोगेको असोज3इतिहास बन्नलाइ
युग युग सम्म सम्झनेछन सलाम छ तिमीलाइ.
स्वभीमान झुक्न सक्दैन हाम्रो………….
कसैको जाल साझी , धम्की र विज्ञाप्तीले
हामी, हाम्रो शीर झुक्दैन स्वभीमान हाम्रो
शकुनी रुपी दया, माया अनी प्रेमले,
राष्ट्र ,राष्ट्रियता र झुक्दैन स्वाभिमान हाम्रो .
नेपालको अस्तित्व, राष्ट्रियता र सकल्पदेखी
नेपालको शुख, शान्ती र लोकप्रिय संविधान देखि
नेपाल, नेपालीपन, गौरव र धमण्ड देखि
विषालु साँपले टोक्न खोज्दैमा, झुक्दैन स्वभीमान हाम्रो
आफ्नै घर नमिलाई, अरुको फुटाउन खोज्दा
सोच्नै पर्दछ हामीले, आन्तरिक कुरा अरुले वोल्दा
अहिले दवाव दिइ, संविधान स्वागत नगरेपनि
विश्वजगतमा माथी छौ, झुक्दैन स्वभीमान पनि
पेट्रोल, ग्यास, डिजेल, मट्टितेल हाहाकार भएपनि
पैदल हिड्दै, खानै नखाइ, भोकै भएपनि
नाका बन्दको धम्की, अन्त्य गर्नको लागी
नेताहरु हो झुक्न पर्दैन, स्वभीमानको लागी
युद्ध क्षेप्यास्त्र, बम, गोला, र रकेटले गर्नै पदैन
पछि नफर्क नेताहरु, हाम्रो अधिकारको लागी
अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था र न्यायको लागी
सक्रियताका साथ अगाडी बढौ स्वमीमान झुक्नै पर्दैन
हाम्रा नाका र वाटोहरु कसैले चाहेर पनि
रोक्न र रोकिन सक्दैन, क्षतिपुर्तिको माग गरौ
अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र न्यायको लागी
सुनौलो अवसर हो, पहल गरौ स्वभीमान झुक्न सक्दैन